သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုအတွက် ဟိုလူမေး၊ ဒီလူမေးခေတ်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ဆုံးလို့လာနေပါပြီ။ လိုချင်တာ၊ သိချင်တာတစ်ခုကို ဖုန်းလေးထုတ်ပွတ် ရှာလိုက်ရုံနဲ့ ရနိုင်တဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Website လေးတစ်ခုတောင်မှ မရှိခဲ့ရင် လူကြီးမင်းရဲ့ အခွင့်အရေးတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနေရမှာပါ။
Website ဆိုတာ အင်မတန်မှ အားကောင်းတဲ့ မားကတ်တင်းလက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ Website ရှိတဲ့အတွက် Customer က ပိုလို့ယုံကြည်စိတ်ချတယ်။ Website က မဖျားနာဘူး၊ ခွင့်မယူဘူး၊ ၂၄ နာရီလုံး မအိပ်စက်ဘဲ လူကြီးမင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးတယ်။ ကဲ…. သူ့ထက်ကောင်းတာ ဘာရှိလဲ။
ဘာကြောင့် SEOMyanmar ကိုရွေးသင့်သလဲ
ကျနော်တို့ဟာ SEO Marketing အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ Website ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာကို တတ်ကျွမ်းနားလည်ထားပါတယ်။ ဒါဟာ အခြားသော Website Agency များထက်အားသာချက်ဖြစ်ပြီး၊ တစ်ခါတစ်လေ Website ဆောက်ပြီးတော့မှ SEO အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် Website ပြန်လည်တည်ဆောက်ရခြင်း အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးမှာပါ။
Content Management System (CMS) လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ Customer ကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်မျိုးကို Customer လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းအတိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင် Customer ကိုယ်တိုင်တည်းဖြတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လည်း သင်ကြားပြသပေးဦးမှာပါ။
ဆန်းသစ်လှပပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ပြည့်ဝတဲ့ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်ကောင်းတစ်ခုဟာ လူကြီးမင်းလုပ်ငန်းစုရဲ့ ပြယုခ်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ ငွေအိုးကြီးတစ်လုံးလဲဖြစ်နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရမှာပါ။
ဘာကြောင့် SEOMyanmar ကိုရွေးသင့်သလဲလို့ မေးရင် အောက်ပါအချက်များကြောင့်ပါလို့ ပဲဖြေပါရစေ။
SEO Marketing အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ Website များသာတည်ဆောက်ပေးခြင်း
ဖန်တီးမှု ဒီဇိုင်း (Perfect Website Design)
Customer ကိုယ်တိုင် လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ တည်းဖြတ်နိုင်သော CMS ဝက်(ဘ်)ဆိုက်များ
ထိန်းသိမ်းတည်းဖြတ်နိုင်အောင် အခမဲ့ သင်ကြားပေးခြင်း
SEO လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာ Tool တွေလိုအပ်မလဲ?
လက်ရှိမှာဆက်လက်အသုံးဝင်နေတဲ့ Digital Marketing Trend များ
Social Media ပေါ်မှာ Negative Comment တွေရလာခဲ့လျှင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
Marketing အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ Instagram ရဲ့ Video Tip များ
Loyal Social Media Relationship တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဘာတွေလိုအပ်လဲ?